‘रानाभाटलाई ७० लाख ‘ : विश्वकप खेल्ने दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली रेल चढेर पाकिस्तान ! : Apangata Sarokar अपाङ्गता सरोकार:Create media space for disABILITY
काठमाडों । ‘देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वकप क्रिकेट खेल्न नेत्रहीन टोली प्लेनको टिकेट किन्ने पैसा नहुँदा रेलबाट पाकिस्तान तिर लागेछ । यता, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले राज्यकोषबाट ८३ लाख पाएछन्’ यो एक जना चिन्तक रतन भण्डारीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लेखेको ‘संशोधित’ स्टाटस हो । उनले कडा शब्दमा स्टाटस खेलेका छन् ।
उनीसँग पछुताउनु सिवाय केही रहेन । विदाई गर्दा उनले प्रतियोगितामा उच्च प्रदर्शन गर्दै आफ्नो देशको शिर उच्च राख्नेमा विश्वस्त छुँ-भने । मन्त्री चौधरीले टोली बस चढ्न लागेपछि मात्रै भेउ पाए । प्रतियोगित खेल्न पाकिस्तान जाने टोलीलाई प्लेन टिकटको व्यवस्था गर्न नसकिएको सुन्दा आफुलाई निकै खल्लो लागेको राज्यमन्त्री चौधरीले सुनाए ।
अध्यक्ष घिमिरेले आफुसँग २२ जनाको टोली रहेको बताए । १४ खेलाडी र अन्य अफिसियल । आउँदा जाँदा र सबै गरेर कति खर्च लाग्थ्यो ? जवाफमा उनले भने, ‘३३ लाख खर्च आउँथ्यो । हामीले भारतहुँदै जान्छौँ । त्यसका लागि २० लाखको व्यवस्था होस् भन्ने चाहेका थियौँ । भएन । अन्तिममा ४ लाखले चलाउनु पर्ने भयो । भारतबाट जाँदा पनि २० लाख पर्ने भो । जानु पर्ने थियो, दुबई ट्रान्जिट हुँदै । त्यसको त कल्पना पनि गर्न सकिएन ।’
सरकारले एकै महिनामा आर्थिक सहायताका नाममा करोडौँ रुपैंया बाढ्यो । तर, देशको शिर उच्च राख्न भन्दै विश्वकप खेल्न हिडेका दृष्टिविहिन खेलाडीले रेल चढ्नु पर्यो । काठमाडौंसहित देशका भिन्न शहरमा बुलेट रेल चलाउने सपना बाँडिरहेको सरकारले खेलाडीलाई प्लेन टिकटको समेत व्यवस्था गर्न सकेन । मुलुक अहिले समाजवाद र समावेशी लोकतन्त्रको नारामा कुदिरहेको छ । सारा नेपाली सम्वृद्धिको सपनाको चाङमाथि सुतिरहेका छन् । समानता र समावेशी शब्दले निकै बजार भाउ पाएको छ । राजनीतिक ध्रूवीकरण बढिरहेको छ । ‘समाजवाद’ बोकेको नेपालेको संविधान कार्यान्वयनको गतिमा दौडिरहेका समाचार सबैले सुनाईरहेका छन् ।
नेपाली टोलीकोे कप्तानी किर्तन श्रेष्ठ दुवालले गर्नेछन् । टोलीको पदमबहादुर बडेला, सुनिल सुवेदी, विक्रमबहादुर राना, नरेश चौधरी र भरत चौलागाईं, सूर्यप्रसाद भट्टराई र सुनिल राना रहेका छन् । यस्तै टिममा खिमानन्द गैरे, बद्री चौलागाईं, रमेशबहादुर बानियाँ, भरत थापा र सुनिल थापा मगर छन् भने रिजन प्रजु प्रशिक्षक छन् ।
साभारः हाम्रा कुरा